လိင်တံ သေး လွန်းသည့် သား ကို အမေ က သတ် | The FNG
လိင်တံ သေး လွန်းသည့် သား ကို အမေ က သတ်
March 10, 2013 · by 21 South News	· in ကျန်းမာရေး, လူငယ်ရေးရာ, ပြည်ပသတင်း.	·
တဲ့ အခမ်းအနား မှာ သားဖြစ်သူ ရဲ့လိင်တံ အလွန်သေးငယ် နေတာ တွေ့ ရတဲ့ အတွက်
ရေ အပြည့် ဖြည့် ထဲ ထားတဲ့ ရေချိုး ကန် မှာ သား ကို နှစ်ပြီး သတ်ခဲ့ တယ် လို့မိခင်ဖြစ်
သူ က ၀န်ခံ ခဲ့ ပါတယ်။
အသက် ၃၈ နှစ် အရွယ် ရှိ မိခင် က ၉ နှစ် အရွယ် သား ဖြစ်သူ လိင်တံ သေးငယ် နေတာ
ဟာ အနာဂတ် မှာ ပြဿနာ ရှိ နိုင်တယ် ၊ သူဟာ ပျိုတိုင်း ကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် ဖြစ်မှာ မဟုတ်
တော့ ဘူးလို့တွေးဆ ချက် နဲ့သား ဖြစ်သူ ကို ဖေဖော်ဝါရီ လ ၂၈ ရက် မှာ သတ် ဖြတ် ပြီး
ရဲစခန်း မှာ သူမ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ဖမ်းဆီး ခံ စဉ် ၀န်ခံ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Thread: Do majority of girls really love big dicks?
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ မှာ အရွယ် ရောက် ပြီး တဲ့ ယောင်္ကျားလေး တွေ ဟာ လိင်တံ အရေပြား
ထိပ် ကို ဖြတ်ကြရပြီး အရွယ်အစား သေးငယ် တဲ့ ယောင်္ကျား လေး တွေ ကို အချို့မိဘ
တွေ က ကြီးထွား လာအောင် ဆရာ ၀န် နဲ့တိုင်ပင် ကြပါတယ်။
ပါးစပ်နဲ့ကာမဂုဏ် ခံစားမှု က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်တင်းနှောမှုမှာ ပိုအရေးပါလာ
ရဲမှုခင်း ပညာရှင် တွေ နဲ့စိတ်ပညာ ရှင် တွေ က သား ရဲ့အင်္ဂါ သေးနေ လို့သတ်တဲ့ မိခင်
ကို ဦးစွာ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု တွေ လုပ် ပြီး မှာ အရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Source : Jakarta Post , MSMNBC
← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့မစ္စတာ ဆမ်ရိန်ဆီ ဒုတိယ အကြိမ်တွေ့ ဆုံ
ဆေးကျောင်းသူ လေး ကို မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်သူ ထောင်တွင်း ဉ် ကြိုးဆွဲချ သတ်သေ →
5 responses to “လိင်တံ သေး လွန်းသည့် သား ကို အမေ က သတ်”
naing May 25, 2013 at 1:52 am · ·
Michale Aung is right …. the 20% Muslim in Myanmar is Truth …..AD2090 …..မတွေးရဲစရာ…simply clever ..are you Muslim or crazy?
simply clever March 15, 2013 at 4:15 am · ·
အလို! michael Aung
အလန့် တကြား ပြော လိုက် တာ အမှား ကြီး ဆို တာ သိ ရဲ့ လား ?
၂၀ % မွတ် မ ရှိ ပါ ၃% ကျော် သာ ရှိ ပါ တယ်
တိုး ပွား လာ မယ် ဆို ရင် ကိုယ့် ဘက် က လည်း တိုး လာ မှာ ဘဲ လေ
ပူ စရာ မ ရှိ ကြံ ဖန် မပူ ပါ နဲ့ ညံ့ ရာ ကျ ပါ တယ်
ကိုယ့် သာ သနာ အား နည်း ချက် မရှိ ယုံ ကြည် ရင် ပူ စရာ မလို ပါ
မြန် မာ ပြည် မှာ တခြား ပူ စရာ တွေ အများ ကြီး
သူ များ ပြော တိုင်း တွေး မကြည့် ဘဲ မယုံ သင့် ပါ
ကဗျာ ဆရာ ပြော မှန် ပါ ၏
Aung Sae Tie ဆရာတော် March 10, 2013 at 9:39 pm · ·
မစင်သည် အဆင်းဝါသော မိလ္လာ
ရတနာသုံးပါးတွင် သံဃာဟူသည် တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ ရဟန်းသံဃာဟူသည် ဗုဒ္ဓ၏ သားတော်များ ဖြစ်ကြလေရာ လေးစားကြည်ညိုဖွယ် အတိ ပြည့်စုံပါ၏။
သို့ရာတွင် ယခုအခါ ခန္ဓာကိုယ်ကို သင်္ကန်းဆီးထားသော်လည်း စိတ်နှလုံးကိုကား သင်္ကန်းမဆီးသော ရဟန်းတု၊ သံဃာယောင်များကို ပေါ်ပေါ် ထင်ထင် တွေ့မြင်လာနေရပါသည်။ ပိုဆိုးသည့်အချက်မှာ ရုပ်ခန္ဓာသင်္ကန်းအရည်ခြုံတို့မှာ သာမာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း တစ်ယောက်ပင် မလုပ်ဝံ့သော အမှုကြီးများကို သိက္ခာမဲ့ခြင်းတွင် အရှက်မရှိခြင်းဖြင့် အားဖြည့်ကာ ပြုလုပ်နေကြပြီး၊ သာပိုဆိုးသည့် အချက်ကား အသိတရားခေါင်းပါး နုံချာ၍ ဆင်ခြင်တုံအရာတွင် လူစဉ် မမီသော လူတချို့ကပါ ထိုရဟန်းတု သံဃာယောင်များကို လူမိုက်အားပေးလုပ်ကာ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်လျက် ရှိနေကြ ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ဆိုးကြီးသာ ဆက်လက်အဓွန့်ရှည် တည်တံ့နေမည်ဆိုပါက ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ နေ၀င်ချိန်သည်လည်း ရောက်လာပါတော့မည်။
၀ီရသူ (သို့) ဗုဒ္ဓသာသနာ၏ လောက်ကောင်
ရဟန်းဟူသည် သာသနာ၏ အင်အားတစ်ရပ်ဆိုလည်းဟုတ်ပါ၏။ အလှတရားလည်း မည်ပါ၏။ ခံတပ်တော် ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါ၏။ သို့ရာတွင် သံဃာတု ရဟန်းယောင်မှာကား သာသနာ၏ လောက်ကောင်ဟုသာ ဆိုရပါမည်။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ဆရာတော်ဟု ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားသောဝီရသူသည် အလဇ္ဇီရဟန်း(အကျင့်ပျက်ရဟန်း) တစ်ဦးသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ဗုဒ္ဓသာသနာကို “ရွှေရောင်အဆင်းလှစေသူမဟုတ်ဘဲ″ ၊ “မစင်ယောင် ၀င်းပစေသူ” လောက်ကောင် တစ်ဦးသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ လောက်ကောင်ဟူသည် မစင်မှာသာ ပျော်မွေ့တတ်သော သဘောသဘာဝ ရှိသောကြောင့်တည်း။
၀ီရသူသည် ရဟန်းတု သံဃာယောင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေ
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူ သာမာန်ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တစ်ဦးသည် ကံ(၅)ပါးကို လုံခြုံအောင် ဆောက်တည်ရပြီး၊ ထိုအထဲတွင် မုသာဝါဒဟူသော မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ကြရပေရာ၊ ၀ီရသူ အလဇ္ဇီရဟန်းသည် အခြားအယူဝါဒများအပေါ် လုပ်ကြံပြောဆိုရေးသားလေ့ရှိရာ၊ မုသာဝါဒကံကိုပင် လုံခြုံအောင် ဆောက်တည်နိုင်စွမ်း မရှိသူဖြစ်၏။ ” ဗလီတွေထဲမှာ မြေအောက်ခန်းတွေ၊ ကျင်းတွေ၊ စစ်စခန်းတစ်ခုလို ဆောက်လုပ်နေတဲ့ ဗလီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိတယ်″ လို့ ဆင်ခြင်ဥာဏ်မဲ့စွာ ယိုးစွတ်ပါ၏။
ဗုဒ္ဓသာသနာတွင် မဂ္ဂ(၈)ပါးသည် သစ္စာတရား(၄)ပါးကို သိမြင်နိုင်စေသော အကျင့်မြတ်ဖြစ်သဖြင့် အနှစ်ချုပ် တရားဟုပင် ဆိုနိုင်ပါသည်။ ၀ီရသူသည် သမ္မာဝါစာ မှန်သောစကားကို မဆိုခြင်း၊ သမ္မာဝါယမ မှန်သောလုံ့လစိုက်ထုတ်မှု မရှိခြင်း (ရဟန်းဟူသည် ရဟန်းနှင့် လျှော်ညီသော လုံ့လစိုက်ထုက်မှု မလွဲမသွေရှိရပါမည်။ ရဟန်းတို့ ကျင့်အပ်သော အမှုကိစ္စတို့၌ မွေ့လျော်မှုမရှိဘဲ ၊ လူမိုက်ဆန်ဆန်၊ လူရမ်းကားဆန်ဆန် ပြုလုပ်နေခြင်းသည် သမ္မာဝါယမ မရှိရာ၊ သမ္မာသတိ မရှိရာ၊ သမ္မာကမန္တ မရှိရာ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ မရှိရာ ရောက်သဖြင့် မဂ္ဂ(၈)ပါးနှင့် ၀ီရသူသည် ပြဒါးတစ်လမ်း၊ သံတစ်လမ်း ဖြစ်နေပါသည်။)
ဗုဒ္ဓ၏ ကမ္ဘာကျော်တရားဖြစ်သော ကာလမရွာသားတို့အား ဟောကြားသော တရားတော်တွင် –
“ကြားယုံမျှ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အစဉ်အလာရှိပြီးသားဟု ဆိုလျှင်လည်းကောင်း၊ ကျမ်းဂန်ထဲမှာ ပါတယ်ဟုဆိုရုံဖြင့် လည်းကောင်း …………တထစ်ချ မမှတ်ယူလေနဲ့ဦး” ဟု ဆုံးမဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ “အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ”၊ “ကိုယ့်တော့် ကရုဏာ” (နှစ်အုပ်စလုံးမှာ ဆိုလိုရင်း အကြောင်းမှာ ဆင်တူသည် ဖြစ်ရာ မသာနှင့်အသုဘ အမည်နှစ်ခုဖြစ်သော်လည်း တစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်သည်) စာအုပ်လောက်သာ ဖတ်ဖူးဟန်ရှိသော ၀ီရသူ၏ ဘ၀သည်ကား ဗုဒ္ဓဟောကြား မြတ်တရား အရကြည့်ပါသော်
“မာပိဋ္ဋက သမ္ပဒါနေန မာဂ ဏှိဌ”
“ပိဋ္ဋကတ် ကျမ်းကြီးတွေမှာ ပါပေသော်လည်း တထစ်ချ မယူဆနဲ့ဦး” (ကောသမုတ္တိသုတ်)
ဒုစရိုက် မနောကံသုံးပါးတွင် အဘိဇ္ဈာ ဟူသည် သူတစ်ပါးဟာအား “ငါ့ဟာဖြစ်လျှင် ကောင်းလေစွ”ဟု စိတ်ထားကြံစည်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည် ။ အခြားအယူဝါဒများ ကောင်းစားနေသည်ကို ဒင်းတို့အစား ငါ့ဟာသာ ကောင်းစားလျှင် ကောင်းလေစွဟု အဘိဇ္ဈာ တရားပွားမျာနေသူ ၀ီရသူသည် မနောဒုစရိုက်ကံကို အချိန်ပြည့်ကျူးလွန်နေသော အပယ် လားမည့် အလဇ္ဇီအကျင့်ပျက် ရဟန်းတစ်ဦးသာ ဖြစ်ပေသည်။
ရန်သူမျိုး(၅)ပါးတွင် ” အမွေခံ သားဆိုး၊ သမီးဆိုး “သည်လည်း တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်ရာ “ဗုဒ္ဓ၏သား” ဟု နာမည်ကောင်းယူထားသော ၀ီရသူနှင့် သူ့လို ရဟန်းတု သံဃာယောင်တို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ သားဆိုး၊ သားမိုက်များသာ ဖြစ်ကြရာ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် ရန်သူများသာ ဖြစ်ကြပါတော့သည်။
“ချစ်သား အာနန္ဒာ၊ ငါဘုရားဟောကြားထားသော ဓမ္မ၀ိနယ ခေါ် သုတ်၊၀ိနည်း၊ အဘိဓမ္မာတရားတော်သည် ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောအခါ အသင်တို့၏ ဆရာဖြစ်သည်″ ဟု ဗုဒ္ဓအဟောရှိတော်မူထားလေသည်။
ဓမ္မ၀ိနယ ထင်ရှားစွာရှိနေသမျှ ဗုဒ္ဓသာသနာ တည်တံ့နေမည်ဖြစ်ရာ ၀ီရသူသာ သာသနာကို တကယ်မြတ်နိုးချစ်ခင်ကာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်လိုပါလျှင် ကလေကချေ အလုပ်များ လုပ်နေမည့်အစား၊ ဓမ္မ၀ိနယတရားများကို ကိုယ်တိုင်ခြေခြေမြစ်မြစ် လေ့လာအားထုတ်ကာ ပြန်လည်သင်ကြားဟောပြောပို့ချခြင်း အလုပ်ကိုသာ ပြုသင့်၊ ပြုအပ်ပါသည်။ ဆရာတော် ရှင်ဆေကိန္ဒ တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအား ဆရာတင် အတုယူသင့်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓသားတော်ဟုဆိုသော ရဟန်းသံဃာများ ပြုရသည့် အဓိကအမှုကိစ္စသည်ကား နှစ်ခုသာရှိပါသည်။
(က) ဂန္ထဓုရ ခေါ် ပရိယတ် စာပေသင်ကြားခြင်း
(ခ) ၀ိပဿနာဓုရ ခေါ် သမထ၀ိပဿနာ ပွားများခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အလဇ္ဖီရဟန်းဝီရသူသည် ထိုအမှုကိစ္စနှစ်ပါးအနက် တစ်ခုကိုမျှပင် လေးလေးနက်နက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ဟန်မရှိဘဲ ပင်ကိုရိုးသားသော ရဟန်းငယ်များကို မိမိကဲ့သို့ အလဇ္ဇီရဟန်းများ ဖြစ်လာအောင် မသမာသောနည်းဖြင့် မြှောက်ပင့် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်ကာ အခြားသော ဘာသာတရားနှင့် ထိုဘာသာဝင်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အသက်၊ အိုးအိမ်နှင့် စည်းစိမ်များအပေါ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်လာကြစေရန် အချိန်ပြည့်အားထုတ်နေသော သင်္ကန်းအရည်ခြုံ လိုင်စင်ရ မသူတော်တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါသည်။
ရဟန်းသံဃာများအတွက် ပါတိမောက်လာ သိက္ခာပုဒ်(၂၂၇)ပါး ရှိသည့်အနက် ကျူးလွန်မိလျှင် ပြန်ကုစား၍ မရသော ” ပါရာဇိက သိက္ခာပုဒ်″(၄)ပါးမှာ
(၁) အမသတ္တ၀ါများနှင့် မေထုန်မှီဝဲမှု
(၂) သူတစ်ပါး ပစ္စည်းခိုးယူမှု
(၃) လူသတ်မှု၊ သေအောင်လှုံ့ဆော်မှု
(၄) ဈာန်မဂ်ဖိုတရားမရဘဲနှင့် ရသည်ဟု လိမ်လည်ပြောဆိုမှုတို့ ဖြစ်ပါသည်။
အလဇ္ဇီရဟန်းဝီရသူ သွေးထိုးချဲ့ကား လှုံ့ဆော်မှု ၊ မုသားမကင်းသော စွပ်စွဲမှုကြောင့် သဘောထား သေးသိမ်၍ အကင်းမပါးသောသူတို့က မိုက်သွေးကြွလျက် ရန်လိုစော်ကားတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် သေကြေပျက်စီးကြခြင်းနှင့် ပဋ္ဋိပက္ခကို အကြောင်းပြု၍ တောကြောင်တို့ လုယက်တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် သူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးယူမှုနှင့် လူသေအောင် လှုံ့ဆော်မှုများတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသဖြင့် ပြန်ကုစားလို့မရတဲ့ ကံအမှုကို ကျူးလွန်းရာ ရောက်ပါတော့သည်။
၀ီရသူသည် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နှင့် အမျိုးသားရေးအားမာန်တို့ကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် “ခွပ်ဒေါင်း” ကိုလည်း စော်ကားသည့် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ကင်းမဲ့ကာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရှိချင်ယောင်ဆောင်နေသူ တစ်ဦးသာ ဖြစ်၍ သူ့၏လုပ်ရပ်များကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာရော မြန်မာလူမျိုးပါ သိက္ခာကျစရာသာ ဖြစ်ပါသည်။ NLDကို တိုက်ခိုက်ချင်၍ “ခွပ်ဒေါင်း”ကို “မွတ်ဒေါင်း” ဖြစ်သွားပြီဟု ၀ီရသူက ခနဲ့ပြောဆိုပါသည်။ တကယ်ပြောသင့်သည့်အမည်မှာ ခွပ်ဒေါင်းကို မွတ်ဒေါင်းဟု ပြောမည့်အစား သူ့ကိုသူသာ “မွတ်စိုးရိမ်ဆရာတော်″ ဟု ပြောင်းသင့်ပါသည်။
၀ီရသူအပါအ၀င် သူ့နောက်ပါ ဂေါက်ကြောင်နှင့် တောကြောင်များ တရားရဖို့ စာတစ်စု
“သူတစ်ပါးတို့၏ မလျှော်သော အပြစ်အနာအဆာတို့က်ို မကြည့်ရှုရာ၊ သူတစ်ပါးတို့၏ ကောင်းမှု၊မကောင်းမှု ပြုမပြုကို မကြည့်ရှုရာ၊ မိမိ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြုမပြုကိုသာလျှင် ကြည့်ရှုရာ၏ ” (ဓမ္မပဒ – ၅၀)
“ ခေါင်းတုံးကာမျှဖြင့် ရဟန်းမည်သည်မဖြစ်၊ သီလအကျင့် ဓုတင်အကျင့်လည်းမရှိသော ချွတ်ယွင်းသောစကားကိုလည်း ပြောတတ်သော၊ လိုချင်မက်မောမှုနှင့် ပြည့်စုံသော သူသည် အဘယ်မှာ ရဟန်းဟုတ်နိုင်ပါအံ့နည်း။ ” (ဓမ္မပဒ -၂၆၄)
“သူတစ်ပါးတို့ထံ တောင်းစားကာမျှဖြင့် ရဟန်းမည်သည် မဖြစ်၊ တရားနှင့်မညီညွှတ်သော အကျင့်ကိုယူ၍ ကျင့်ကာမျှဖြင့် ရဟန်းမည်သည် မဖြစ်″။ (ဓမ္မပဒ -၂၆၆)
” အကြင်သူသည် မြတ်သောအကျင့်ရှိသူဖြစ်၍ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုကို ပယ်နုတ်လျှက် ခန္ဓာ(၅)ပါးဟူသော လောကကို ဥာဏ်ဖြင့် ကျင့်၏။ ထိုသူကို ရဟန်းဟု ဆိုအပ်၏” (ဓမ္မပဒ – ၂၆၇)
” မကောင်းမှု၌ စိတ်သည် မွေ့လျော်တတ်၍ ကောင်းမှုပြုသောအခါ၌ နုံ့နှေးတတ်ရကား မကောင်းမှုမှ စိတ်ကိုတားမြစ်၍ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို လျင်မြန်စောစွာ ပြုလုပ်ရာ၏” (ဓမ္မပဒ- ၁၁၆)
မွတ်စိုးရိမ်ဆရာတော် အလဇ္ဇီရဟန်းဝီရသူ အမြင်မှန်ရပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေသောဝ်။
Michael Aung March 11, 2013 at 7:58 am · ·
Aung Sae Tie ဆရာတော် သည် NLD ကို မွတ်ဒေါင်းဟု ပြော ခံရမှုကြောင်း ဆတ်ဆတ်ထိ မခံဖြစ်ပြီး ဦးဝီရ သူအား လောက်ကောင်ဟု မပြောဆိုသင့်ပါ။
ဦးဝီရသူ အခုလိုမျိုးလုပ်နေခြင်းသည် ရဟန်းကျင့်ဝတ် နှင့် မညီ ကြောင်း သူကိုယ်တိုင် သိသလို ၊ လူအများလည်း သိကြပါသည်။ အခု လို ကျင့်ဝတ် ကို မလိုက်နာ ခြင့်ကြောင့် သူ့ သံသရာ လမ်းခရီး အတွက် အာမခံချက် မရှိပါ။ ဦးဝီရသူ ကိုယ်တိုင်လည်း သိပါလိမ့် မည်။ သူ့ကိုယ်ကျိုး အတွက်ပဲကြည့် ပြီး ၀ိပတ်သနာ ပွားနေရင် သူ့သံသရာ အတွက် အာမခံချက် ရှိပေလိမ့်မည်။
ဒါပေမဲ့ သူဘာအတွက် အခုလို ကိုယ်ကျိုစွန့်ပြီး လုပ်နေသနည်း။
အရင်က ဗုဒ်ဓ ဘာသာ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ အင်ဒို နီးရှား ၊ မလေးရှား နိုင်ငံတွေ အခု မွတ် နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။
အခု မြန်မာ နိုင်ငံမှာ မွတ် ရာခိုင် နှုန်း ၂၀ % ကျော်နေပြီ။ အခုလူဦးရေတိုး နှုန်းအတိုင်း ဆက်သွားရင် နောင် နှစ် ၄၀ (၂၀၅၃) မှာ သူတို့မွတ် လူဦးရေ ၅၀% ၊ ၂၀၉၂ လောက်မှာ မွတ်လူဦးရေ ၉၀% ဖြစ်သွားရင် ၊ မဲပေးတဲ့ စနစ်နဲ့ သမ္မတ ရွေးမှာ ဖြစ်လို့ မွတ် သမ္မတ ဖြစ်သွား ရင် မွတ်မြန်မာ နိုင်ငံကြီး ဖြစ်သွားပြီ။
(က) ဂန္ထဓုရ ခေါ် ပရိယတ် စာပေသင်ကြားခြင်း ရဲ့ အဓိပ်ပါယ် ကို ပြန်လည်စဉ်းစား ကြည့်ရင်။
သာသနာတော်ပြန့်ပွားဖို့ ၊ သာသနာတော်ကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်။
သာသနာတော်ကို ဖျက်ဆီးမဲ့ အရာတွေကို ကာကွယ်ခြင်းဟာလဲ သာသနာတော်ကိုကာကွယ်စောင့်လျှောက်ခြင်းပါဘဲ။
ဆရာတော် အချင်းချင်း အကောင်းမြင်နိုင်ပါစေ။
myoaungaung March 11, 2013 at 7:13 pm · ·